Hoentina ny fepetra fitantanana marika marika kosmetika. Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fametrahana marika elektronika?
Vao tsy ela akory izay, ny Sampan-draharaham-pitsaboana momba ny zava-mahadomelina dia namoaka taratasy momba ny fangatahana ampahibemaso ny hevitry ny "Fepetra fitantanana ny fametahana marika amin'ny tarehy (Draft for Solicitation of komentar)" (izay nantsoina hoe "Drafitra ho an'ny fanehoan-kevitra") hangataka ny hevitry ny besinimaro. Anisan-dry zareo...
Ny vahaolana amin'ny faritra RFID dia manohana ny fametrahana automatique ny fananan'ny trano fitahirizana
Miorina amin'ny rafitra RFID, ny mpamatsy lozisialy mifanohitra amin'ny Asset Recovery Specialists (ARS) dia afaka mitsitsy adiny 30 isan-kerinandro. Mandritra izany fotoana izany, noho ny rafitra RFID izay manara-maso ny fanisana ireo fitaovana efa niasa, dia nitombo 30% ihany koa ny famokarana baiko. Rehefa avy nanamafy fa ny teknolojia RFID pr ...
Ny tsy fitovizan'ny marika RFID mavitrika, semi-active ary passive
Ny rafitra RFID feno dia misy tag, mpamaky ary rafitra fikirakirana fampitana data. Amin'ny ankapobeny dia mizara ho RFID miasa, semi-activite ary passive RFID. Ny atin'ny tagan'ny RFID dia puce iray misy antena. Ny chip dia mitahiry fampahalalana izay afaka mamantatra ny kendrena, ary ny functi ...
Ny any ivelany dia namolavola sensor tsy misy tariby izay afaka manara-maso ny hatsembohana sy ny famonoana amin'ny alàlan'ny RFID, izay azo miraikitra amin'ny hoditra
Vao tsy ela akory izay, ny Oniversiten'i Stanford sy ny Oniversiten'i Berkeley dia nandalina manokana ireo sensor roa izay afaka mifamatotra mivantana amin'ny hoditra. Mazava be izy ireo ary afaka manao sensing tsy misy tariby ary manangona angon-drakitra sarotra ara-batana. Ireo karazana sensor roa ireo dia tsy mila ny fampifandraisan'ny ext ...
Ny teknolojia RFID dia manampy ny toeram-piompiana hanokatra faritra vaovao
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny toekarena sy ny fanatsarana haingana ny fari-piainan'ny olona, ​​dia niova be ny firafitry ny sakafon'ny mpanjifa. Ny fangatahana sakafo be otrikaina toa ny hena, atody ary ronono dia nitombo tokoa, ary ny kalitao sy ny fiarovana ny sakafo dia manana al ...
Miditra lalina amin'ny fiainantsika, inona ny fampiharana ny teknolojia RFID ao amin'ny Internet of Things?
Raha te hiresaka momba ny haitao tambajotra Internet of Things lavitra ianao dia tombanana fa hain'ny ankamaroan'ny olona ny Bluetooth. Fa raha ny tena izy, ankoatry ny Bluetooth, ny teknolojia fampahalalana matetika ny radio RFID dia efa niditra tamin'ny fiainantsika andavan'andro, ary ampiasaina isaky ...
Ny teknolojia UHF RFID dia manamora sy mora kokoa ny fitantanana ny fitaovana miady amin'ny afo
Ao anatin'ny dingan'ny famonoana afo dia tena zava-dehibe ny fitantanana fitaovana fiadiana amin'ny afo. Amin'ny vonjy taitra, ny fomba hahazoana antoka fa afaka mitondra fitaovana miady amin'ny afo ampy hihaonana amin'ny fampiharana eo an-toerana amin'ny vonjy maika ianao dia lahasa lehibe iray amin'ny lafiny ady amin'ny afo. Ahoana ny fanatsarana, fanavaozana ary ...
Ny fifehezana ny fitaterana ny fitrandrahana RFID dia mahomby kokoa
Ny fampiroboroboana ny harena an-kibon'ny tany dia rohy miasa lehibe ho an'ireo orinasa mpamokatra loharanon-karena. Andraikitra lehibe ho an'ny mpitantana orinasa ny miantoka ny fitrandrahana ara-dalàna sy ara-tsiansa ny harena an-kibon'ny tany ary hiantohana ny fepetra famokarana azo antoka ho an'ny asa fitrandrahana sy fitaterana. Amin'ny ankapobeny, b ...
Manambara ny fametahana chip RFID maimaimpoana ho an'ny alika voasoratra anarana i Shenzhen
Raha tia alika ianao dia omeo "puce" ny alikanao, tianao ve izany? Tamin'ny 30 Mey, notontosaina ny hetsika Andron'ny alika Shenzhen faharoa. Ny birao monisipaly misahana ny fitantanana ny tanàna sy ny fanamafisana ny lalàna manerantany dia nanambara ny fanombohana tanteraka ny asa fametrahana aprily elektronika ho an'ny alika. Alika rehetra ao amin'ny c ...
Manatsara ny fitantanana ny famokarana ny fitantanana ny gara ny RFID
Amin'ny fizotry ny famokarana orinasa mpamokatra nentim-paharazana, ny fomba famokarana teo aloha dia anjakan'ny famokarana tokana. Raha vao mihaona amin'ny fomba fanao sarotra sy rohy famokarana maro ity fomba famokarana tokana ity dia misy ny olana isan-karazany. Ilay lehilahy mitafy akanjo ...
Ny Shanghai Children's Medical Center dia manangana fitantanana hendry ny fako ara-pahasalamana ary manatsara ny fahombiazan'ny fanangonana fako ara-pahasalamana sy famindrana amin'ny alàlan'ny RFID
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-12
Amin'izao fotoana izao, ny habetsahan'ny fako ara-pahasalamana ateraky ny firenentsika dia mitombo isan-taona, ary ny fisorohana ny aretina sy ny fifehezana ary ny loza ateraky ny tontolo iainana koa dia mitombo ihany koa. Indrindra indrindra hatramin'ny fiparitahan'ny valanaretina satro-boninahitra vaovao, ny fanariana fako ara-pahasalamana azo antoka dia mifandray mivantana amin'ny overa ...
Mitsangana ny tsenan-divay "divay tranainy", mampiseho ny fahaizany miverina amin'ny laoniny ny RFID
“Tao anatin'ny folo taona lasa, tena nahatsiaro ho lalina aho. Ny toaka dia nisolo ny divay mena tamin'ny sakafo hariva natokana ho an'ny mpandraharaha. Tao anatin'izay roa na telo taona lasa izay dia miharihary fa ny alikaola dia manavaka ny toaka taloha amin'ny toaka hafa. Ny toaka tranainy dia afaka mitantara tantara misimisy kokoa. ” Ny filohan'ny PAX sy ny talen'ny fikarohana O ...